Posts tagged မျက်မမြင် / Free Video Chat Conferendo hug the world Community
Blog of prettygloria
Gefiltert nach Tag မျက်မမြင် Neue Beiträge in diesem Blog.
Geschrieben am 04.01.2010 von
မျက်မမြင်တယောက် စားသောက်ဆိုင် အတွင်းသို. ၀င်ထိုင်လိုက်ပါတယ်။ ဒါနဲ. စားသောက်ဆိုင် ပိုင်ရှင် က ကိုယ်တိုင်ထပြီး ဟင်း menu ထိုးပေးလိုက်ပါတယ်။ မျက်မမြင်က 'ကျွန်တော် က မျက်စိမမြင်တဲ. အတွက် ကြည်.လို.မရပါဘူး ။ ကျေးဇူးပြုပြီး ရှေ.ကလူတွေစားသွားတဲ. မဆေးရသေးတဲ. ဇွန်း သာပေးပါ။ ကျွန်တော် အနံ.ရူပြီး ဘာစားမယ်ဆိုတာ မှာပါရစေ' ။ ဆိုင်ရှင် လဲ စိတ်ရူပ်သွားပြီး မဆေးရသေးတဲ. ဇွန်း၊ခတ်ရင်းတွေ ကို ယူလာပြီး မျက်မမြင်ကို ရူခိုင်းပါတယ်။ မျက်မမြင် က ဇွန်း၊ခတ်ရင်း တွေကို ရူ ပြီး အမဲဆီပြန် စားမယ်လိုပြောပါတယ်။ ထိုအခါဆိုင်ရှင်က ခေါင်းကုတ်ပြီး စာဖိုမူး သူ.မိန်းမ ကို ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင်ပြောပြပါတယ်။ မျက်မမြင် လဲ စားပြီး ပြန်သွားပါတယ်။ နောက် အချိန် အတန်ကြာမှာ ထိုစားသောက်ဆိုင်ကိုပြန်လာပါတယ်
။ ဆိုင်ရှင် က လဲ မမှတ်မိတော.လို. menu ကို ထိုးပေးပြန်ပါတယ်။ ဒါနဲ. မျက်မမြင် က ပထမအကြိမ်က အကြောင်းကို ပြန်ပြောပြလိုက်တော. ဆိုင်ရှင် က လဲ အမှတ်ရပြီး မဆေးရသေးတဲ. ဇွန်း၊ခတ်ရင်းတွေ ကို ယူလာပေးပြီး ရူစေခဲ.ပါတယ်။ မျက်မမြင်ကလဲ အားပါးတရ ရူရှိူက်ပြီး ကြက်ကောင်လုံးကြော် ကို အရက်နဲ. မြည်းမယ် ဆိုပြီး မှာလိုက်ပြန်ပါတယ်။ ဆိုင်ရှင် က လဲ ၂ခါ တွေ.ကြုံလိုက်ရတော. အင်မတန် ညစ်သွားပြီး ဒါဟာ သူနဲ. သူ.မိန်းမ ကို တမင် လာပြီး အနှောက် အယှက်ပေးနေတာများလား လို.တွေးမိပါတယ်။ ပထမအကြိမ်လိုပဲ စားသောက်ပြီး ပြန်သွားပါတယ်။ လာပြန်ပြီ တတိယအကြိမ်။ ဆိုင်ရှင် က မျက်မမြင် ဆိုင်ထဲဝင်လာတာနဲ. မီးဖိုဆောင်ထဲက သူ.မိန်းမ ဆီပြေးပြီး 'မိန်းမ ဟို မျက်ကန်းလာနေပြီ ၊ ရော. ဒီဇွန်းနဲ. ခက်ရင်းတွေ ကို နင်. အတွင်းခံဘောင်းဘီနဲ. ပွတ်ခဲ.လိုက်၊ ငါတို. အဲ.လူကို ပညာပြရမယ်'။ မိန်းမကလဲ ယောက်င်္ကျားပြောသလိုလုပ်ပြီး ဇွန်း၊ခတ်၇င်းတွေကိုပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒါနဲ. ဆိုင်ရှင် က မျက်မမြင်ကို 'မင်္ဂလာပါ၊ ဒီတခါတော. ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမှတ်မိပါပြီ၊ ဇွန်း ခတ်ရင်း အဆင်သင်.ပါပဲ'။ မျက်မမြင် က အားပါးတရရူရိူက်လိုက်ပြီး 'ဟေ မိအေး ဒီဆိုင်မှာ အလုပ်လုပ်နေတာပါလား'။ ထိုအခါ ဆိုင်ရှင် က "ဗျာ !!!!!!" Artikel lesen
“မလှတာ ကျွန်မအပြစ်လား မောင်ရယ်” ♥♥နှလုံးသားတစ်စုံမြေမြုပ်သဂြိုလ်လိုက်ပြီ♥♥ ♥နှလုံးသားထဲမှာ ဆောင်ထားသင့်တဲ့ ဖရီးဆော့ဝဲလ် တစ်ခု♥ ♥မပြောဖြစ်ခဲ့မိဘူး တိတ်တခိုးကြိတ်ပိုးခဲ့ရသူကို♥ ♥အရေးပါတဲ့တွေ့ရှိချက်နဲ့ ဖန်တီးချက်များ♥ ♥နှုတ်ဆက်ဖို့မမေ့ပါနဲ့♥ ၀၀၉ ခုနှစ် ၁၀ တန်း မြန်မာစာ မေးခွန်းလွှာ 101010 ၂၀၂၀ ရောက်ဝန်ဆောင်မှု A to Z Day How Old R U I HATE YOU love is Name Not for Sale PUNK ဟုခေါသည်။ ကံကြမ္မာ=လိုင်းကားဒါရိုက်ဘာ ကယ်တင်ရှင် ကာလ ဒေသ ပယောဂ ကိုကိုစိတ်ကူးယဉ် ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေ သူငယ်ချင်း ချစ်သူစာဖိုမူး ချစ်သူဆီသို့ဝန်ခံခြင်း ချစ်သူများနေ့မှာ ဘာဖြစ်လို့ ချောကလက် လက်ဆောင်ပေးကြသလဲ ချစ်သူရေ ချစ်နေတုန်းကတော့ပျော်စရာအတိပေါ့ ငယ်ရှိမယ့်နေရာ ငယ်ပေါင်း ငယ်မေးမယ် ငယ်လေးဆန္ဒ ငယ်လေးသိခဲ့ရသောအချစ် ငရဲသားနဲ့ နတ်သား ငါ ငါတို့ အမေ ငါသာလျှင်ဖြစ်ခဲ့ရင် ငှဲငှဲငှဲ(ဟီးဟီး) စိတ် စိတ်စိတ်ပါကွယ် စိတ်မပျက်နဲ့ကွယ်ကလေးရယ် စိတ်ဝင်စားစရာမေးခွန်းများ ဖြေကြည့်ပါဦးနော်(၂) ဆုံဖြစ်ခဲ့ကြရင် ဆုးံဖြတ်ရန်ခက်ခဲသောအခြေအနေ ဆုတောင်း တံတိုင်း တခါတုန်းကသူကပြောတယ် တခါတလေ တချို့က အချစ်ကို ဒီလိုပြောကြတယ် တစ်ရက် ၅၀၀စား တတ်သည့် ပညာ မနေသာ။ တရားရုံတော်သို့ဦိးတိုက်လျှောက်ထားအပ်ပါသည်။ တွဲဖက်မစားသင့်သောအစာများ ထာဝရ သူငယ်ချင်း ထာဝရ အဖော် ထိုလူမျိုးကိုငယ်လေးဟုခေါသည်။ ထိုကြောင့် ဒါပဲယူတော့နော် ဒါလည်းဟုတ်သားပဲ ဒီလောက်ပဲတက်ဖို့လိုတယ် နာတဖျားသာလိုလျှင် ဖိတ်စာ ခြစ်ရင်မထွက်သောမှင် ခြားနာချက် ပြည့်စေသော် မြင်ပါဦိး ဘဝဖော်ဆိုတာ ဘာ ဘီယာအဖြတ်တော်သူ မချစ်တက်ရင်သိပ်ကောင်းမယ် မင်း=ဘာလဲ မင်းထူမှထမယ်ထမယ် မင်းရင်ဘတ်ထဲမှာ ထည့်ထားဖို့ မင်းသိထားစမ်းပါ မင်းသိဖို့ကောင်းတယ် မင်းအတွက်သတင်း မင်းကြောင့်ပေါ့ မနက်ဖြန် မိန်းကလေးဆိုသော မိုးလေ၀သအထူးသတင်းကြေညာချက် မျက်မမြင် မှန်တယ်ဟုတ် မှားတက်ပါ့လေ ရင်တွင်းဖြစ် ရင်နာတယ် လည်းမလွမ်းချင်ဘူးငါ့မျက်ရည်လေးမကျနိူင်ဘူးတစိမ်းတယောက်လိုငါ~#့ကို လတ်တလော လ္ဘက်ရည်သောက်သူများ လမ်း လူညာတစ်ယောက်ရဲ့သစ္စာ လူပျိုကြီးစစ်စစ်ရဲ့ ဂုဏ်ကျက်သရေများ သင် သူ့ကို တကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင် …… သင့်အတွက်သိစေရန် သတိ- မလုပ်ရ။ သတိရမိဆုံးကနင်ပါ သိပ်ခံစားနေရရင် သူ့အမေ ရင်ကျိုးအောင် သူငယ်ချင်းတွေဘယ်လိုကွဲကွာသွားကြသလဲ… နှလုံးသားရဲ့လျို့ဝှက်အပြုံး ကြယ်စဉ်တခုရဲ့ပဲ့တင်ချိန် ကြက်ဖလောက်တော့သနားတာပေါ့ Neue Kommentare
ကဗျာလေးတွေ ကို ကြိုက်တယ်
0123456789: ဘာလဲ ဟ... အစက်လေးတစက်က ဘာပြောချင်တာလဲ?ပြောစရာမရှိတော့လား?